महालक्ष्मी लाइफको नाफा ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ - Wnepal.com
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा ९९.५१ प्रतिशतले बीमा शुल्क आर्जन बढाउन सफल भएको छ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा ७८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको यहि अवधिमा कम्पनीले ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
बीमा शुल्क आर्जन सँगै जारी भएको बीमालेखको संख्या पनि १६२ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा कम्पनीले २३ हजार २१९ वटा जीवन बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको यहि अवधिमा कम्पनीले ८ हजार ८७२ वटा जीवन बीमा पोलिसी बिक्री गरेको थियो ।
जीवन बीमा व्यवसाय विस्तार सँगै यस वर्ष दाबी भुक्तानी पनि बढेको छ । गत वर्षको यहि अवधिमा तीन वटा पोलिसीमा मात्रै दाबी परेकोमा यस वर्ष ७ वटा पोलिसीको मृत्यु दाबी भुक्तानी गर्नु परेको छ । कम्पनीले ९ महिनाको अवधिमा २ करोड ८२ लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो जीवन बीमा कोष १७१ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । कम्पनीको जीवन बीमा कोष एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको भएको छ । गत वर्ष यस्तो कोषमा ४९ करोड १९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । कम्पनीले दिर्घकालिन क्षेत्रमा मात्रै २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरे बापत ७ करोड १८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा १६ करोड ८ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न सफल भएको छ ।
गायक प्रताप दास को स्वरमा रहेको ‘माया ‘सार्वजनिक
नेपाल लाइफद्धारा १ करोड २४ लाख रुपैंया मृत्यु दाबी भुक्तानी
सिटिजन लाइफको अनलाईन बीमा दाबी सेवा अन्तर्गत २ दिनमै मृत्यु दाबी भुक्तानी
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सम्पन्न
सिटिजन लाइफद्वारा एकै दिन दुई मृत्यु बीमा दाबी रकम हस्तान्तरण
प्राइम लाइफको १३ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘प्राइम शुभलाभ’ बीमा योजना
नेपाल लाइफको झण्डा पहिलो पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा
माछापुच्छ्रे बैंकको कार्ड मार्फत समान खरिद गर्दा १५ प्रतिशत छुट
मेगा बैंकले ल्यायो फोनबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिने २ लाखसम्मको कर्जा योजना
गरिमा विकास बैंकको सहायक कम्पनी बन्यो के.सी.एल असट्युट
मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई दराजबाट सामान किन्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट
सरकारले कर तिर्न तालिका सार्वजनिक गर्यो
कोकाकोलाको सेयर ४ अर्ब डलरले घट्यो
सांग्रिला बैंकको डिवेञ्चरको बिक्री असार ६ गतेदेखि
लक्ष्मी बैंकका १२ सय कर्मचारी सहित ९ वटा वाणिज्य बैंकका १७ सय भन्दा बढि कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा, राज्यलाई धम्काउने, तर्साउने अधिकार कसैलाई छैनः सामाजिक सुरक्षा कोष
प्रमाणपत्र धितो राखेर रु २५ लाख ऋण दिने कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयनमा जोड
महत्तो, शाह, कार्की होइन भट्टले पुनवीमा कम्पनीको बाजी मार्ने पक्का पक्की !
कोरोना महामारीको मौका छोपी एनआईसी एशिया बैंक र प्राइम कर्मशियल बैंकद्वारा कृत्रिम रिकभरी, नक्कली कर्जा बिस्तार, लाखौ लगानीकर्ताहरु जोखिममाः राष्ट्र बैंक मुखदर्शक ?
नेपालमा खोप लैजाने पहल भइरहेको छ
अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि माछापुच्छ्रे बैंकको सहयोग
आजदेखि निषेधाज्ञा थप कडा